नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो, एकै दिन २८८ जनामा संक्रमण पुष्टि — onlinedabali.com
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो, एकै दिन २८८ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा थप २८८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा २७० पुरुष १८ महिल गरी २८८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
योसँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या २०९९ पुगेको छ ।
नियमित पत्रकार सम्मेनमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवकोटाले भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा २० जना, सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा ६४ जनाको पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए । त्यस्तै दैलेखमा ३७ जनाको पोजेटिभ आएको छ । हेटौडामा १ जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा १७ र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अस्पतालमा १८ जनाको पोजेटिभ देखिएको छ ।
डा. देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रगोगशालामा गरिएको परीक्षणमा टेकुमा १ सय १८ जनाको पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३ हजार ४ सय ४० र आरडिटी विधिबाट २ हजार ५ सय ८८ वटा परीक्षण भएको छ । हालसम्म पीसीआर विधिबाट ७५ अजार ३ सय ४३ र आरडिटी विधिबाट १ लाख १६ हजार ३ सय ४५ वटा परीक्षण भएको छ ।
परीक्षणको प्रादेशिक विवरणअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १२ हजार ४ सय ५१, प्रदेश नम्बर २ मा ७ हजार ५, बागमती प्रदेशमा २५ हजार ७ सय ३६ र गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ६१ वटा आरडिटी परीक्षण भएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा २५ हजार ४ सय ९४, कर्णाली प्रदेशमा १४ हजार ५३ रसुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ हजार ५ सय ४५ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ ।